MAHAFINY Mudry CAP-10 ho an'ny FSX
Mudry CAP-10 ho an'ny FSX HOT
Modely amin'ny antsipiriany sy feno, tena tsara add-on ! F-BXHV aeroclub Cap Evolution, LFPT Pontoise-Cormeilles, France Ny Mudry CAP 10 dia fiaramanidina aerobatic fampiofanana roa seza natsangana voalohany tamin'ny taona 1970 ary mbola am-pamokarana tamin'ny taona 2010. Ny fiaramanidina dia novolavolaina avy amin'ny Piel Super Emeraude ary teraka tamin'ny CP100. Novana ilay anarana hoe CAP 10, CAP ho an'ny 'Constrions Aéronautiques Parisiennes'.
Ny CAP 10 dia novokarin'i Mudry (anaran'ny mpanamboatra azy) ao Bernay, Frantsa, nividy ny CAP Industries izay lasa Apex Aircraft. Taorian'ny fatiantoka ny Apex tao amin'ny 2008, dia nomena ny Dyn'Aviation ny zon'ny mpamokatra entana.